Ninkii Ciidanka Uganda ku sheegeen inuu dhalay Iidi Amiin oo beeniyay
By AxadleTM On Oct 31, 2019 Last updated Nov 1, 2019
Wiilka uu dhalay Madaxweynihii hore ee Uganda oo laga helay Soomaaliya
Sheekh lagu magacaabo Sheekh Cabdulaahi oo ay ciidamada Uganda ku sheegeen inuu yahay wiil uu dhalay Madaxweynihii hore ee dalka Uganda Iidi Amiin ayaa beeniyay warkaas isagoo sheegay inuu yahay muwaadin Soomaali ah.
Wadaadka Sheekh Cabdullahi Shaamow oo ah Macalin dugsi Qur’aan iyo Iimaam Masjid ku yaal deegaanka Carbiska ee gobolka Sh/hoose ayaa beeniyay warbixin uu qoray wargeyska New Vision ee dalka Uganda oo lagu sheegay in uu dhalay Madaxweynihii hore ee dalka Uganda Idi Amin Dada.
“Waxa ay ahayd shirqool ay ciidamada Uganda sameeyeen,waxaan u tagnay xarunta ay ku leeyihiin carbiska inaan ka wadahadalno dhibaato ay gaadiidka ciidamada AMISOM gaarsiiyeen wiilkeyga balse waxaa halkaas aan ku aragnay saraakiil kale kuwaasoo nagu qasbay inaan sawir la galno.”ayuu yiri Sheekh Cabdulaahi Shaamow.
Sidoo kale Sheekh Cabdulaahi ayaa sheegay in uu aad uga xun yahay falkan ay kula kaceen ciidamada Uganda uuna ka doonayo dowlada Soomaaliyeed inay arrintan soo farogeliyaan.
“Magaciisu waa Sheekh Cabdulaahi Shaamow Fariid Cabdi Mahadalle hooyadiina waxaa la yiraahdaa Makaay Guhaad, aabihii iyo hooyadiina waxa ay ku aasan yihiin deegaankan carbiska,Daadaha la sheegayana ma dhalin aabihii iyo hooyadii waa ilmadeer waana Sheekhaal.”ayay u sheegtay weriye ka tirsan taleefishin Dalka, mid kamid ah haweenka ku nool deegaanka Carbiska oo muddo ka badan afartan sano tiqiin qoyska Macalin Cabdulaahi.
Sheikh Cabdullahi Shaami ayaa ku noolaa deegaanka Carbiska tan iyo sanadkii 1975-kii ku noolaa deegaanka Carbiska hase yeeshee bilowgii toddobaadkan ayuu wargeyska New Vison ee dalka Uganda daabacay in uu yahay wiil uu dhalay Madaxweynihii hore ee dalka Uganda ayna u dhashay hooyo Soomaali ah oo ka soo jeeda magaalada baydhabo.
Ma jiro illaa iyo hadda wax war ah oo ka soo baxay Maamulka gobolka Sh/hoose iyo dowlada federalka oo ku saabsan sheegashada ay dowlada Uganda sheegtay in Sheekh Cabdulaahi yahay muwaadin u dhashay dalka Uganda ayna la xiriirin doonto eheladiisa.
Sheekadda jinsiyadiisa lagu bedelay Imaamka ayaa waxaa si carro leh uga war-celiyey dadka degaanka oo is-barbar taagan wadaadka isla markaana hoosta ka xariiqay “in noloshooda khatar la geliyay”.
“Nimankan niman shirqool wato ayey ahaayeen, niman annaga noo dan leh ayey ahaayeen,” ayuu Faarax hadalkiisa ku daray.
Shugri Maxamed Cali, mid kamid ah dadka degaanka kuna jirta ardayda Sheekh Cabdullaahi ayaa aad uga xumaatay wararka laga baahiyey macalinka.
“Ciidamadda Uganda iyaga oo ceelkeenii biyaha ku fadhiya oo guryaheenii degan in ay haddana dadkeenii ku darsadaan ma ogolin. Waxaan codsaneynaa in Soomaaliya isku tiirsanaato cadowgoodana ogaadaan,” ayay tiri.
Cabdullaahi oo degaanka Carbiska ee duleedka Koonfur Galbeed ee magaaladda Muqdisho soo degay sanadkii 1975-tii ayaa Aabihii Sheekh Shaamow Fariid Cabdi Mahad-Alle iyo Hooyadii Makaay Guhaad ku duugan yihiin halkaas.
Halkan hoose ka dhagayso Sheekh Cabdulaahi iyo qaar ka mid ah dadka ku nool Carbiska.